တစ်စုံတစ်ယောက်ကဤသို့ပြောခဲ့သည်မှာအချိန် ZOOM GROUP ခေါ်ဆိုမှုများသည်ပင်ပန်းနေပြီး၎င်းတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သင့်သည် - သတင်း
အချိန်တန်ရင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကပြောခဲ့သည်။ Zoom group ခေါ်ဆိုမှုများသည်အလွန်အမင်းပင်ပန်းနေပြီး၎င်းတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သင့်သည်
ဘုရားသခငျ, ငါ Zoom ၏ဒါပျင်းတယ်။
ငါငါ့ကို mums ကားစပျစ်နွယ်ပင်
ငါ 240p ၌ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုမြင်လျှင်၏စိတ်ကျေနပ်မှုပါပဲ။ အဆိုပါအဆုံးမဲ့ဉာဏ်စမ်းပဟေ,ိ, ငါအလုံအလောက်အားလုံး, သုံးလတစ်ကြိမ်အခြေခံပေါ်မှာစကားပြောခံရဖို့အကြောင်းကိုအလုံအလောက်ဂရုမစိုက်သောလူများ။ ခြောက်လတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဟောင်းများအတွက်ဖြေရှင်းခြင်းတို့ဘာကြောင့်မှားခဲ့တာလဲ။ မိဘများနှင့်ယောက္ခမများနှင့်နှစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသည်အပတ်စဉ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားမှုအလွန်ရုပ်ဆိုးသောအရာဖြစ်လာသည်။ တရားဝင်ရပ်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, တရားစွဲဆိုမှုသို့ပျော်စရာရံဖန်ရံခါထိုးရှိပါတယ် - ဥပမာအားဖြင့်, ပြောင်းလဲနောက်ခံမကြာမီ၎င်း၏အယူခံဝင်ဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်သူကအဆုံးသတ်ဘယ်မှာတကယ်ပါပဲ။
ချုံ့ချဲ့ခေါ်ဆိုမှုများသည်အကြွင်းမဲ့အဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး၊ သူတို့နှင့်ယခု၊ အစဉ်အမြဲသူတို့ရပ်နေသည့်နေရာတွင်သူတို့ကိုရပ်တန့်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ အာမင်။
အလုပ်: အခြား Zoom ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသလား။
- Alyssa Purser (@AlyssaPurser) မေလ ၄ ရက်၊
ဖြစ်ကောင်းအရာအားလုံး၏ကမ္ဘာသစ်အစီအစဉ်အပေါ်ငါ့အမျက်ဒေါသအတွက်အရေးအပါဆုံးအချက် Zoom ကိုအဆုံးမဲ့ဉာဏ်စမ်းပဟေisိဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများက share screen ဖန်သားပြင်ကိုရှာဖွေနေသည့်စားပွဲခုံတစ်လျှောက်တွင်သူတို့၏မောက်စ်ကိုနှိပ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဖုန်းမှအသံနှင့်အတူတေးဂီတကိုလှည့်ပတ်ခြင်းကောင်းသည်ဟုဆုံးဖြတ်ရန်မိုက်မဲသောမိုက်ခရိုဖုန်းဖြင့်လူတစ် ဦး ကိုဖြစ်စေ၊ အစမှအဆုံး fuck ဆိုတဲ့အိပ်မက်ဆိုး။
မိသားစုအုပ်စုစကားပြောသည်မှာပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သည်၊ ထို့နောက်အလုပ်မိတ်ဆွေများထံမှသူငယ်ချင်းများသို့ကွဲပြားသောအုပ်စုများကိုတွေ့ရသည်။ ထိုအခါအဘယ်သူမျှမဖြည့်ညှင်း, အဖြေများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးခြင်းမရှိလမ်းရှိပါတယ်, နှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုအစဉ်အမြဲသူတို့ကိုယ်သူတို့အဖြေတွေကိုသိသောကြောင့်မှအဖြေကိုသိတယ်သောမိုက်မဲပတ်ပတ်လည်ကိုပြု၏။
အားနည်းသောအင်တာနက်သည်အတွေ့အကြုံကို ၁၀ ဆပိုမိုနာကျင်စေသည်
သင်အားနည်းသောအင်တာနက်ရှိသော်ငြားလည်း Zoom သည်သင်၏မျက်နှာကို abotic cubic mishmash အရောင်များကို contort နှင့် pixelate လုပ်လိမ့်မည်။ နာပါတယ်
ဒါမှမဟုတ်အသံကမြန်မြန်ဆန်ဆန်အသံမထွက်ခင်တိတ်ဆိတ်သွားလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သူပြောသမျှကိုသင်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။ ဤအရာနှစ်ခုလုံးသည်စကားပြောဆိုခြင်းကိုဆန့်ကျင်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စကားပြောနေသူများကိုကူညီနိုင်သည်။
လူတိုင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတာနဲ့တူတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးတဲ့အခါ Zoom ခေါ်ဆိုမှုများ၏မုန်းတီးမှု၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ ပို၍ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖြစ်စေသည့်အရာမရှိပါ။ ။ သင်ဟာထိုင်ပြီးစောင့်ဆိုင်းနိုင်တဲ့လူစားမျိုးလား၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ပထမ ဦး ဆုံးသွားဖို့အခွင့်အရေးကိုခုန်ချလိမ့်မည်လား။ အနည်းဆုံးတော့အခြားလူသုံးယောက်ကသင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အတိုင်းအတိအကျတူညီစွာလုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မည်။
ကောင်းမွန်သောအင်တာနက် (သို့) မရ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူမရှိခြင်း ရှိပါတယ် ကျနော်တို့ရှည်လျား Brit အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသောခိုင်မာတဲ့လူမှုရေးနယ်နိမိတ်ကိုတိုက်စား။ ဟားဟား၊ သင်၏လူ့ဘောင်ဥပဒေကိုအင်တာနက်အခြေခံဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ ငါတို့ကအွန်လိုင်းပြောနေတာလေ၊ yeah လိုပဲအဆင်ပြေပါ၊ လူ ၃ ယောက်ကိုတစ်ကြိမ်မှာစကားပြောခွင့်ပြုပါစေ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့ညစာအတွက်ဘာတွေစားနေလဲဆိုတာကိုတစ်ယောက်ပြောနေချိန်မှာသင်ပြောနေတာတွေအားလုံးကိုကြားဖို့သိပ်လွယ်ပါတယ်၊ တခြားတစ်ယောက်ကသူတို့အိမ်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ သူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးပုံသဏ္.ာန်။ UGH ။
zoom call ရဲ့အဆုံးမှာငါ့ကို vs zoom call ရဲ့ start မှာငါ့ကို pic.twitter.com/Nx40TwBLLT
- ဒေါက်တာ savasavasava (@savasavasava) မေလ ၂ ရက်၊
သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်ရသည့်အချိန်အချို့နှင့်အတူခွဲခွာခြင်းထက်အဘယ်အရာကပိုဆိုးနိုင်သည်နည်း။ သငျသညျမဟုတ်ရင်စကားပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကြောင်းလူတို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့ Hard- ရရှိခဲ့သည်အချိန်နှင့်အတူနှုတ်ဆက်။
ကျွန်ုပ်၏တက္ကသိုလ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးတွင် ၁၀ ကြိမ်မနည်းစကားပြောခဲ့သူနှင့်အဘယ်ကြောင့်အုပ်စုလိုက်တွေ့ဆုံခြင်းကိုငါရုတ်တရက်ရောက်ရှိနေသနည်း။
လူတွေကမင်းကိုစိတ် ၀ င်စားစရာလုံးဝမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းပြောပြီးသူတို့ကိုယ်သူတို့သယ်ဆောင်လာတယ်
စာသားအရသင်လုပ်နိုင်တာကတော့ထိုင်ခုံမှာထိုင်ပြီးစကားဝိုင်းကလူအများစုကဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုရှည်လျားတဲ့စကားပြေစကားပြောတဲ့ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးသင်ဟာခရီးသည်တစ် ဦး သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံဖို့ပါပဲ။
သင်မပေးဆပ်ပါကမိနစ် ၄၀ တိုင်းအစည်းအဝေးအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ရမည်
သင် Zoom အတွက်ငွေပေးချေရန်သင့်တွင်ငွေရှိလျှင်သင်အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူသို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးသူတစ် ဦး လည်းလိုအပ်သည်။
သင့်တွင်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများရှိပါကသင်နှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရလိမ့်မည်<40 minute call, but if you’re unfortunate enough to be anything like me, you’ll have to put up with your distant relatives being absolutely flummoxed at the idea of having to exitachat and then rejoinanew one. Is it really that hard?? For those with needy parents/friends and shallow pockets, it’s an absolute nuisance to have to set upanew call when the existing one has expired.
တိုင်းချဲ့ခေါ်ဆိုမှု၏အစအ ဦး မှာစကားပြောဆိုမှု pic.twitter.com/mgT8ajkWWf
- ဒါန Schwartz (@DanaSchwartzzz) မေလ ၂ ရက်၊
ဘာလဲ?? မင်းရဲ့ပုံပန်းသဏ္withာန်နဲ့မင်းကြိုးစားအားထုတ်ရ ဦး မယ်။
ငါကဒါတစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်မူတည်သည်ကိုငါသိတယ်၊ အဲဒါဟာတစ်နေ့တာကုန်မှာသင့်ရဲ့ living ည့်ခန်းထဲမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့လက်ပ်တော့ပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။
အိမ်မှအလုပ်လုပ်ကိုင်ဆဲနှင့် zoom ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုအားကိုးနေရသောသူများအတွက်သင်၏မျက်စိမှအိပ်စက်ခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်၊ ဗလာဗူးများနှင့်ဘူးခွံများကိုကင်မရာပစ်မှထုတ်။ သင်၏ထိပ်ပိုင်းတစ်ဝက်ကိုဖုံးအုပ်ရန်မလိုအပ်သောအပိုခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်မရာ setup နဲ့ပတ်သက်ရင်သတိထားဖို့လိုတယ်
သင်သို့မဟုတ်အခြားသူများအားအပေးအယူဖြစ်စေနိုင်သောသင့်နောက်ကွယ်မှမှန်များမရှိစေရန်သေချာစေရန်၊ အမြင်အာရုံရောအမြင်အာရုံပါသင့်ကိုရှက်ရွံ့စေသောမိသားစု / အိမ်သူအိမ်သားများမရှိကြောင်းသေချာစေပါ။ ဒါမှမဟုတ်သင်တကယ်ကို fuck ဆိုတဲ့ရုံမကသင်လုံးဝကင်မရာကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာမေ့သွားနိုင်တယ်။ ဘင်နဲ့မတူပါနဲ့
ဒီအပို whacky ရီစရာပဟေ,ိအဘို့, amigos shoes ဖိနပ်တစ် whacky ရီစရာတစ်စုံဝတ်ဆင်
ဒါဟာ 2020 ခုနှစ်ဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးနေဆဲ soooooo မကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်
ငါနိဒါန်းအတွက်ကအပေါ်ထိမိပေမယ့် nah, ဒီသူ့ဟာသူအတွက်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်နှင့်အသက်အရွယ်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အ ၀ တ်လျှော်စက်ထဲသို့ပထမဆုံးထည့်သွင်းထားသည့်အသံနှင့်မပြည့်စုံသော HD ဗွီဒီယိုနှင့်အသံမရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းလုံးဝမရှိသလော။ ဆိုလိုတာကငါဘာမှမသိဘူး၊ ငါဘုရားရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးရုပ်ရှင်ဒီဂရီလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် ၂၀၂၀ ပဲ။ # harryainsworth2020
•ဤသူသည်မည်သူမဆို၏ခံစားချက်များကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲသူတို့အား Zoom ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားလုံးမှထွက်ခွာရန်ဖြစ်သည်
• quarantine ရည်းစားရဖို့နှင့်သော့ခတ်တစ်လျှောက်လုံးသူ့ကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရန်
• Zoom ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတွင်သင်ကြုံတွေ့ရမည့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့်သူအမျိုးအစားတိုင်း